‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा अब झारपात उखेल्ने काममा खर्च हुँदैन’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
भदौ २७, २०७८ आइतबार २०:३०:५५ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डौ – गएको शुक्रवार संसदमा पेस गरिएको प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक रूपले उठेका प्रश्नमा स्पष्ट पारेको छ ।
आइतवार मन्त्रालयमा आयोजित ‘पोस्ट बजेट प्रेस मिट’ मा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रतिस्थापन विधेययकका मुख्य–मुख्य विषयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभयो ।
पाँच लाख परिवारलाई दश हजारका दरले राहत बाँड्ने योजना आएछ जबकि राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार बहुआयामिक गरिबीको मारमा ५० लाख व्यक्ति छन् । यो पनि पहुँचवालाको खल्तीमा पुग्ने त होला ?
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने कुरा सुन्न थालेको एक दशक पुग्न लाग्यो तर कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन, अहिले आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
अहिले रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिन्छ जसले गर्दा देशको उत्पादन वृद्धि हुन सकेन र नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन सकेन । विदेशमा कमाएको पैसा जति दैनिक उपभोग र विलासितामा खर्च हुने ग¥यो । तर अब त्यो प्रवृत्ति बदल्छौँ । रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्छाैँ ।
राजनैतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई मासिक तीन हजार भत्ता बाँड्ने कार्यक्रमले राज्यकोषमा अनावश्यक दायित्व थपेको देखिन्छ । भोलि यो बढ्दै जान्छ, कसरी धान्न सकिन्छ ?
अहिले हरेक प्रदेशमा चार/चार वटा विद्यालयमा नमुनाको रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको परिणाममुखी अभ्यास गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । सुर्खेतलगायत देशका केही ठाउँमा यसको व्यावहारिक अभ्यास भइरहेको छ । त्यो सफल पनि छ । त्यसैलाई नीतिमा रूपान्तरण गरेर देशभर विस्तार गर्न खोजिएको हो । विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिक कुरा सिक्नुका साथसाथै उत्पादनका काममा सरिक भएर आय आर्जन गर्ने मोडालिटी हो ।